Home Wararka Dowlad Soomaaliya oo Tacsi udirtay dad ku dhintay Tanzania
Dowlad Soomaaliya oo Tacsi udirtay dad ku dhintay Tanzania
War qoraal ah oo ka soo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Tacsi garabgal ah loogu diray Xukuumadda iyo Shacabka dowladda Tanzania oo musiibo ku dhacday.
Warkan qoraalka ah ee ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda XFS ayaa u qornaa sidan:-
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay tacsi u direysaa Xukuumadda iyo Shacabka saaxiibka ah ee Tanzania kadib markii doonida magaceedu yahay MV Nyerere ku degtay harada Victoria shalay oo khamiis ahayd, kuna beegnayd (20 September), iyadoo siday boqolaal rakaab ah, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 100 ruux, halka kuwa kale la la’yahay.
” Fekerkayaga iyo garab-galkeena waa mid la socda qoysaska iyo shakhsiyaadka dhacdadan naxdinta leh ay ku yeelatay saameyn”
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa ay si hubaal leh u garab taagan tahay Shacabka iyo Dowladda Tanzania waqtigan adag ee xaaladda la soo gudboonaatay
Previous articleFahad Yaasin oo ku sii Jeeda Magaalada Dooxa, si uu soo Qaado Lacagtii Maalgelinta kooxda Shabaab (Sawiro)
Next articleMaxaa Sababay in MW Farmaajo ka baaqdo Shirka Fadhiga guud ee QM?
RW Xasan Kheyre oo Sheegay in uusan aqoonsaneyn Madaxweyne Xaaf. (Dagaal...
Khilaaf xoogaan oo soo kala dhex-galay Madaxda ugu sareysa Maamulka Galmudug